अष्ट्रेलियामा रहेको छोरालाई नेपालबाट आमाको पत्र : ‘पैसाको बोट कस्तो हुँदो रहेछ ?’ – Ramailo Sandesh
अष्ट्रेलिया –विनय श्रेष्ठ : प्यारो छोरा, फुर्सद नभए पनि चिठ्ठी पठाइस् खुसी लाग्यो । सन्चै छस् होला भन्ने आशा राख्दछु । थुप्रै सपनाहरु बोकेर अस्ट्रेलिया गाछस् । त्यसमा अहिलकति हाम्रो अनि धेरै चाहिं तेरै सपना थियो । त्यो भन्दा पनि बढी तेरो भविष्य जोडिएको छ ।
त्यसैले अस्ट्रेलियामा कति कमाउछस्, छिमेकी आफन्तले के भन्छन्, केहीको हामीलाई मतलव छैन । हामी त बस् तेरो उज्जवल भबिष्यको कामना गर्दछौं । तँ ठूलो मान्छे भएको हर्न चाहन्छौं । उमेरसँगै शारीरिक कदले त जन्मने हरेक प्राणी ठूला हुन्छन् तर तँ चाहिं काम र कर्मले ठूलो मान्छे भएको हेर्ने ठूलो धोको छ हाम्रो ।
त्यहाँ गएर आफैंले हरेक अभाव र समस्यासँग एक्लै जुध्नपरेपछि बल्ल दुख बुझिस् होला,पैसा वोटमा फल्दैन भन्ने पनि चेत भयो होला । बाबु तँ आफैले भनेको होइनस् र ?
अष्ट्रेलियामा त घण्टाको २० डलर कमाइन्छ रे भनेर ? अनि म त दिनमा दश बाह घण्टा काम गर्छु भनेर तँ आफैं मख्ख परेको पनि हामीलाई सम्झना छ । हामी त तेरो आमा वुवा न पर्यौं,तेरा सबै कुराहरुलाई विश्वास गर्यौं त्यो विश्वास मात्र तँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छस् त्यही पनि तँ आफैंले रोजेको बाटो हिडेर भन्ने मात्र हो । अरु त हामीले केही आशा गरेका छैनौं ।
बाबु आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अर्थोक केही छैन । त्यसैले स्वास्थ्यको ख्याल राखेस् । समयमा खाना गरेको छस् कि छैनस् ? सेकेण्ड र मिनेट मिनेटको महत्व राख्ने ठाम भन्छस् तँ आफैं तर आफ्नो स्वास्थ्यका लागि चाहिं कति समय छुट्याएको छस् नि ?
हुन त अस्ट्रेलिया गएर यसले के पकाएर खाला भनेर मैलै चिन्ता गर्दा तँ आफैंले बुरुक्क बुरुक्क उफ्रदै भनेको थिइस्–मामु पनि कति चिन्ता लिनुभएको ? अब म ठूलो भैसकें । अस्ट्रेलियामा यहाँ जस्तो होइन,भोक लाग्यो कि पिज्जा किनेर खान्छु,बर्गर खान्छु भनेर ।
हामीलाई त तेरो भविष्यसंग मतलव छ,तेरो कमाइसंग होईन । त्यसैले मेहिनत गर, राम्ररी पढ् र हामीले सोचेको जस्तै ठूलो मान्छे बनेस् ।तँलाई विदाइ गरेर फर्कने वित्तिकै धेरैले अब तँ नेपाल फर्कदैन भने । हुन पनि यस्तै देख्छु ।
विदेशको रमझम र मोह त्यागेर पढाइ सकेपछि नेपालमा आएस् र आफूले पढेको,देखेको र सिकेको कुराहरु यही गरेर देखाएस् । अनि पो हाम्रो देश पनि बन्छ,विकासले गति पाउँछ र समृद्ध नेपाल बन्छ । तर सधै अर्काको देशमा वसेर भविष्य उज्जवल पार्छु भन्ने सोचिस भने तेरो यत्रो मिहिनत र दुखको पनि कुनै औचित्य रहन्न ।
किनभने विदेशमा जति सेवा गरे पनि,जति पसिना रोपे पनि फलको मालिक त अरु नै हुन्छन् । तिमी हामी विदेशमा जति नै बसे पनि आखिरमा पाउँने नाम र इज्जत त त्यही आप्रवासी हो । त्यसैले भन्छु,नेपाली स्वाभिानलाई गिर्न नदिनु । जति बस्छस् नेपाली भएर बस्नु । नेपाली भनेका मिहिनेती र मिलनसार हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेर बसेस् । आमाले पत्रमा पनि अर्ती दिन छोडिनन् नभनेस्,किन कि यो मेरो अर्ती होइन,चाहना मात्र हो ।
विदेश गएकाहरु छिट्टै नेपाल फर्केको थोरै मात्र देखेको छु मैले पनि । ठूलो देश,ठूलै लगानी अनि ठूलै सुख,सुविधा र विकास अवश्य होला । त्यही समृद्धिमा अल्झिएर धेरै मान्छेहरु विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहँदैनन् रे । तर हामी चाहन्छौं अरुका छोराछोरी भन्दा तँ फरक भएर निस्केस् । लौ त आफ्नो स्वास्थको ख्याल राखेस् । तिम्री आमा ‘नेपाल’
फिल्ममा डाक्टर इन्जिनियर तर पढाईमा जिरो भएका ८ बलिउड स्टारहरू